Black Magic: အစ-အဆုံး (Edited And Reposed)
အစ-အဆုံး (Edited And Reposed)
Posted by Black Magic | Posted in ဟာသများ | Posted on 4:37 PM
သို့ / ပန်းလေးလှတော့ လိပ်ပြာတွေ ဝဲတယ်တဲ့။ သိုးငယ်လေးလို ဖြူစင်ပြီး သမင်မျက်လုံးမှာ ဇင်ယော်တောင် မျက်ခုံးလေးနဲ့ ငါးရံ့ကိုယ်လုံးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူကလေးကို ချစ်မိသူထဲမှာ ကိုလဲ အပါအဝင်ပေါ့။ သူလေးမိဘတွေရဲ့ပြည့်စုံမှုကြောင့် တပါးသူတွေ ဆင်ကြံကြံ ဝံပုလွေချောင်း ချောင်းနေကြပေမယ့် ကိုကတော့ ရိုးသားစွာ ချစ်တာပါ။ သူလေးရဲ့ စွန်ရဲလို စူးရှတဲ့ အကြည့်တွေမှာ အကြိမ်ကြိမ် ကျရုံးခဲ့သူလေ။ ပေတစ်သီး ၊ ကျီးတစ်သားလို ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ကို့ရဲ့အချစ်ပါ။ ကိုကတော့ ဥစ္စချော ရုပ်ပေါ ၊ ဘဲလိုအသံ ၊ ကျွဲလိုအသား ၊ ဇီးကွက်မျက်လုံး ၊ လိပ်ခါးနဲ့ ဖားဖင်ငါးပါးကြံအင်လက္ခဏာ ပြည့်စုံသူပါ။ ဒါပေမယ့် ခြင်္သေ့လို တည်ကြည်ပြီး ကျားလို ရဲရင့်သူနော်။ ဘဝပေးအခြေအနေကြောင့် ကျီးကန်းနဲ့ ဗျိုင်း တုနှိုင်းလို့ မရနိုင်တာကြောင့် ဆင်ဖြူမျက်နှာ ဆင်မဲမကြည့်ဝံ့ သလိုတော့ ဖြစ်မိသား။ မိချောင်းမင်း ရေခင်းပြတာမဟုတ်ပေမယ့် သူလေးသေချာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါ။ အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုရောက်ရင်တော့ ရှဥ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ ဖြစ်မယ့် အဖြေလေးပေးပေါ့။ အဖြေမရမချင်း ဝက်အစာတောင်းသလို တကျီကျီ မအီမိအောင် ကျိုးစားထိန်းနိုင်ပေမယ့် ခွေးနေရာမရသလို နေမထိထိုင်မသာတော့ ဖြစ်နေရမှာပါ။ ညည အိမ်မက်ထဲမှာလေ… သူလေးနဲ့ကို လားကြီးစီးလို့ ကမ္ဘာအပြင်ဘက်ကို သွားကြတယ်တဲ့။ သူလေးအတိတ်မှာမှားခဲ့တာတွေရှိရင်တောင် ကို့ဘဝတစ်ခုလုံး နွားအဖြစ်ခံပြီး သားပိုက်ကောင်လို ကို့ရင်ခွင်ထဲမှာ သူလေးကိုထားပြီးကြောင်လေးကို ယုယသလို ယုယမှု လေးတွေ ပေးချင်တယ်ကွာ။ သူလေးရဲ့ မေတ္တာတွေနဲ့ တုန့်ပြန်လာမယ့်စာကလေးကို သစ်ကုလားအုပ်လို အမျှော်လင့်ကြီး မျှော်လင့်နေမယ်နော်။ ကိုမျှော်လင့်သလိုလေး ဖြစ်လာရင်တော့ ငါးသလောက်ပြုံးလေးနဲ့ မြင်းတစ်ကောင်လို အပြေးလေးလာခဲ့မယ် သူလေးရယ်…
. အချစ်ရယ် ဒီစာကိုရေးလိုက်လို့ ကိုယ့်ငါးချဉ် ကိုယ်ချဉ်တယ်၊ မိကျောင်းမင်း ရေခင်းပြတယ်၊ ခရု ခါးတောင်းကျိုက် ဖမ်းတယ်လို့ မထင်စေချင်ဘူးနော်။ ကိုယ့်မှာ မင်းကိုချစ်မိမှပဲ ခဲမှန်ဖူးတဲ့ စာသူငယ်လိုလို၊ မပိုင်ဝက်မွေးဆိုသလိုလို၊ အိတ်ပေါက်နဲ့ ဖားကောက်ဆိုသလိုလို ဖြစ်နေပါပြီ။ အခုအချိန်မှာ ၀က်ဖြစ်မှတော့ မစင်ကြောက်နေ လို့လည်း မထူးတော့ပါဘူးလေ။ မင်းအဖေကို ပြောလိုက်ပါ မြင်းက မလှုပ် ခုံကလှုပ်၊ ယုန်ကမတိုး ပိုက်ကတိုး ဖြစ်မနေပါနဲ့လို့။ ယူမှာက မင်းကိုပါ။ ဘယ်နှယ့်သူက ကဲကဲလှုပ်နေရတာလဲလို့။ ကြက်တူရွေးက တော်တော် မယ်ဘော်က ကဲမနေပါနဲ့လို့။ မင်းအဖေက ကိုယ့်ကိုပြောတယ် ငကြောင် တဲ့။ မင်းဟာ အလုပ်မရှိ ကြောင်ရေချိုးပေးနေတဲ့ ကောင်စားမျိုးတဲ့။ ဒါပေမဲ့ပြောလိုက်ပါ ကိုယ်ဟာ ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုးမဟုတ် သလို တောမီးလောင်တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ်တဲ့ ကောင်စားမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူးလို့။ ကိုယ့်ရဲ့ မဖြစ်စလောက် သာရတဲ့ လစာလေးဟာ ကြောင်အို ကြွက်မလေး ဆိုသလိုဖြစ်နေတော့လေ…….နောက်ပြီးတော့ မင်းကို လာလာကြောင် နေတဲ့ သင်္ဘောသားဆိုတဲ့ အကောင်ကလည်း မင်းအဖေလိုလူအတွက် ကြောင်ခံတွင်းပျက်နှင့် ဆက်ရက်တောင်ပံကျိုးလို ဟိုကောင့်အတွက်ကျတော့ ကံကောင်းတဲ့ကျား သွားရင်းသမင်တွေ့ဆိုသလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ သူများ အကြောင်းလည်း မပြောချင်ပါဘူးအချစ်ရယ် ဒီကောင့်မိဘက ချမ်းသာတော့ ကျားကြီး ခြေရာကြီး၊ ရွှေပင်နားတော့ ရွှေကျေးမျိုးတော့ ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ တကယ်တော့ သူ့မိဘတွေဟာ ဒီယုန်မြင်လို့ဒီချုံထွင်၊ ကြွက်သေတစ်ခု အရင်းပြုရုံလေးနဲ့ စားရကံကြုံပြီး မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲ၊ ထန်းသီးကြွေခိုက် ကျီးနင်းခိုက်ဖြစ်လို့၊ ကြက်ကန်းဆန်အိုးတိုးကာ ယုန်ထောင်ကြောင်မိ ဖြစ်သွားသူ တွေပါ။ အများညီဤကိုကျွဲဖတ် ဆိုသလို လုပ်ချင်ရာလုပ်နေတဲ့ ပြောတော့ကြောင်သူတော် ယိုတော့ ကြွက်မွှေး ဆိုတာ သူ့မိဘတွေပေါ့။ ဆင်သတ်အရပ်ဝေပြီးမှ ဆင်သားရေကို ဆိတ်သားရေနဲ့ဖုံးချင်တာ သူတို့အသိုင်းအ၀ိုင်းပေါ့။ ကိုယ် အထင်အကြီးပါဘူး။ အထင်လည်း မသေးပါဘူးနော်။ ဒီကောင်ကတော့ ကျွဲကူးရေပါ ဆိုတဲ့အတိုင်းသူစီးတဲ့မြင်း အထီးမှန်း အမမှန်းတောင် မသိ၊ မိဘဆိုတာလည်း ကျီး ဘုတ်ရိုသေ၊ ဘုတ်ကျီးရိုသေတဲ့ အဆင့်တောင်မရှိ၊ ခွေးကလေးအရောဝင် ပါးလျက်နားလျက်၊ ကျီးကန်းသူကောင်း မြှောက် ချေးကောက်စား ဆိုတဲ့သူမျိုးပါ။ ထားလိုက်ပါလေ။ ခွေးရူးကောင်းစား တစ်မွန်းတည့်ပါပဲ။ အချိန်တန်တော့ နွားပိန်ကန်ပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ မင်းသာအဲဒီအကောင်နဲ့ညားရင် ဆင်နားရွက်ကြွက်တပ်၊ ကြွက်နားရွက်ဝက်တပ် ပေးသလိုမျိုး ကို့ရိုးကား ရား ဖြစ်နေမှာ။ မင်းအဖေကလည်းကြောက်ပါတယ်ဆို ကြောင်နဲ့တို့ ဆိုသလို မင်းမလိုချင်တာကိုပဲ စွတ်ပြီး ငါးကြင်း ဆီနဲ့ ငါးကြင်းကျော်ချင်နေတာ။ ကိုယ်ကတော့ မင်းမိဘနှစ်ပါးကြောင့် ကျွဲနှစ်ကောင်ကြားထဲက မြေစာပင်၊ ကျားချင်း ကိုက်ရာ သမင်းလမ်းကူးမှား ဖြစ်မယ့် မင်းဖြစ်အင်ကိုသာတွေးတွေး ရင်မောပြီး ကြမ္မာဆောင်သားကောင်ဆိတ်ဖြစ်နေပါပြီ။ တကယ်ပါအချစ်ရယ် မင်းအဖေဟာ ငှက်တစ်ကောင် မြားတစ်စင်း၊ ရှဉ့်တစ်ကောင်မြားတစ်စင်း ဆိုတာကို မြင်ပုံမရဘူး။ ကြောင်ရုပ်ဖြစ်စေ ကြွက်သေတာလိုရင်းဆိုပြီး စွတ်မိုက်နေတာ။ အင်း… မပြောချင်ပါဘူးလေ…ငါးတကာယိုသည့်ချေး ပုဇွန်ဆိတ် ခေါင်းမှာစု လို့ပဲပြောပြော၊ ငါးခုံးမတစ်ကောင်ကြောင့် တစ်လှေလုံးပုပ် လို့ပဲပြောပြော။ သူ့မိဘတွေကလည်း ဒီကောင့်ကြောင့် နာမည်ပျက်နေတာကြာပါပြီ။ တကယ်တော့ အညှီရှိရာယင်အုံဆိုသလို မင်းအဖေဆီကို ဒီကောင်ဟာ ငါးပွက်ရာငါးစာချဖို့ ရောက်လာတာပါ။ ပြီးတော့ ဆင်ကောင်ကြီး အမြီးကျမှတစ်ဆိုသလို၊ ငါးစိမ်းမြင် ငါးကင်ပစ်လုပ်သွား ဦးမှာ။ နောက်ဆုံးကျမှ ဒီကောင့်ကြောင့် လူတွင်ပါနွားကျားကိုက်ဆိုတဲ့အချိန်၊ ကျားသေကို အသက်သွင်းလို့ စင်းစင်း သေပါပြီလို့ မင်းအဖေအော်နေဦးမှာ။ အဲလို ဖွတ်ထွက်မှ တောင်ပို့မှန်းသိတဲ့အချိန်မှာ ကျားရှေ့ မှောက်လျက်လဲသလိုဖြစ် နေမယ့် မင်းအဖေရဲ့ ကိုယ့်ယောက္ခမလောင်းကြီးရဲ့ သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်းအဖြစ်ကို ကိုယ်မြင်ယောင်မိနေတယ်။ မင်းအမေကြီးကျတော့လည်း ဒီကောင်နဲ့ပေးစားချင်တိုင်း သမီးတစ်ကောင် နွားတစ်ထောင်ဆိုပြီး အရပ်ထဲမှာ လက်ပံပင် ဆက်ရက်ကျသလို ပွက်ပွက်ညံနေပါရော။ တကယ်ကျတော့ ရှမ်းကြိုက်နွားချောဆိုတာ ကိုယ်ကတော့ မြွေမြွေခြင်း ခြေမြင်ပြီးသားပါနော်။ အင်း… နွားအို မြက်နုကြိုက်သလို မင်းအဖေကြီးငွေကြိုက်တာလည်း နွားငတ်ရေချ ဆိုသလို၊ ကိုယ့်အတွက်တော့ အထူးအဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူး။ မင်းအဖေက ဆင်သွားရင် လမ်းဖြစ်မယ်လို့ထင်နေတာလေ။ ငါးစာသာမြင် ငါးမျှားချိတ်မမြင် ဆိုသလိုမျိုး ဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒါထက် သမီးချောလေးအရှိန်နဲ့ ဆင်ဖြူတော်မှီပြီး ကြံစုပ်၊ မျောက်ပြဆန်တောင်း လုပ်နေတယ်လို့လည်း မပြောချင်ပါဘူး။ နွားပေါ့ အစွံထုတ်လို့ ပြောရင် မင်းပါစိတ်ဆိုးတော့မယ်။ အင်း… ဆင်ဖြူ့မျက်နှာဆင်မည်းမကြည့်ဝံ့ ဆိုသလို ကိုယ့်ရဲ့ မိဘ Background ကလည်း သူ့အတွက်ဆို နွားပျိုသန် လှ နွားအိုပေါင်ကျိုး သာသာပဲရှိတော့… အင်း… ယုန်အတွက်ချုံကကြောင့်ကြနေရတာပေါ့။ မင်းအဖေကပြောတာ။ ကိုယ့်ကို ခွေးမသား တဲ့။ ခွေးမြီးကောက်ကျည်တောက်စွပ်တဲ့။ မင်းကိုလည်း မွဲချင်တဲ့ခွေး ပြာပုံ တိုးဆို။ ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မှာပါ ကိုယ့်အခြေအနေကလည်း လူမလေး ခွေးမခန့်တဲ့ အပြင်၊အရပ်ကလည်း ခွေးပစ်တဲ့ တုတ်သာသာရှိတော့… ကိုယ်နဲ့ပေးစားမယ့်အစားခွေးအမြီးဖြတ်ပြီးသာ ပေးစားမယ်တဲ့။ အဲဒါကို ဟိုအကောင်ကြားရင် သူ့ကိုခွေးအမြီးပြတ်နဲ့ နှိုင်းတယ်ဆိုပြီး စိတ်ဆိုးဦးမယ်။ တကယ်ကျတော့ ကိုယ်ဟာ ခွေးရူးဖက်ကိုက် ခွေးကောင်းနား ရွက်ပြတ်ဖြစ်သွားမှာ ကြောက်တဲ့ခွေးဖြူတောမတိုးဝံ့တဲ့သူပါ။ ကဲပါ… ခွေးဟောင်လို့တောင်ပို့မပြေးနိုင်ပါဘူး။ ပိုနေမြဲ ကျားနေမြဲပါအချစ်ရယ်။ တစ်ခုတော့မင်းအဖေကိုပြောချင်တယ်။ ဟောင်လွန်းသည့်ခွေး လူမလေးတတ်ဘူးဆိုတာကို။ ကျန်သေးတယ်….. မင်းအဖေကပဲပြောတာနော် ကိုယ်ဟာ တော်တော်နွားကျတဲ့ကောင်တဲ့။ ကိုယ်ကလည်း ဘယ်ရမလဲ၊ ဒါပေမဲ့ ခင်ဗျားလိုငါ့စကားနွားရ မပြောတတ်ဘူး၊ နွားသိုးကြိုးပြတ် မရမ်းတတ်ဘူးလို့ နွားရှေ့ထွန်ကျူးပြလိုက်တာပေါ့။ အချစ်ရယ် ကိုယ်ဒီစကားတွေပြောနေရတာ ကျားလိုက်မှ တုတ်ခုတ်၊ ဆင်လိုက်မှသစ်ပင်ရှာတာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ကိုယ့် မှာ ရှာသမျှ ပိုက်ဆံကလည်းသမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း ဆိုသလိုဖြစ်၊ ကံအကြောင်းက မသင့်လေတော့ မြွေပွေး ခါးပိုက် ပိုက်မိလျက်သားလည်းဖြစ်၊ ကျားချင်းကိုက်ရာ သမင်ကူမမှားဖို့အရေး၊ပျားလည်းစွဲသာ ရှဥ့်လည်းလျှောက်သာ ဖြစ်အောင် လုပ်ရင်း မြွေမသေ တုတ်မကျိုး Style မျိုးဖြစ်သွားတော့၊ ဖွတ်မရ ဓါးမဆုံး၊ ငါးမရ ရေချိုးပြန်ရုံ လေးပါ။ ကိုယ့်မှာတော့ ကျားလည်းကြောက်ရ ကျားချေးလည်းကြောက်ရဆိုသလို မင်းမိဘကော၊ မင်းကိုပါလန့်ပြီး ကျားရဲရာ ကြမ္မာမရိုးသာဆို သလိုဖြစ်နေရပါပြီလေ။ တကယ်တမ်းဆိုရင် ကိုယ်ဟာမြင်းကောင်းခွာလိပ် လေးပါကွယ်။ မင်းအဖေကလည်း ကိုယ်က မင်းကိုချစ်ပါတယ်ပြောတိုင်း ကြိုးကြာဆို ဘာငှက်လဲ၊ ကျားကိုက်ပါတယ်ဆို နာတာရှည်လားချည်း လာလာမေးနေလေ တယ်။ ဆင်ကောင်ကြီးတွေ့မှတော့ ဆင်ခြေရာရှာစရာ လိုတော့မလားကွယ်။ ကိုယ်ကလည်း မင်းအဖေရှေ့မှာ ကျွဲပါး စောင်းတီး… အဲ…မိကျောင်းမင်း ရေခင်းပြတွေ ခဏခဏမလုပ်ချင်ပါဘူးလေ။ လူပဲအချစ်ရယ် စင်းလုံးချောတော့ ဘယ်ပြည့်စုံမလဲ။ သိကြားမင်းတောင် ကျွဲယောင်ဆောင်တာဂျိုကားတယ်လို့ ပြောခံရသေးတာပဲ။ ထားဗျာ။ ပုံလုံတစ်လှည့် ငါးပျံတစ်လှည့် ဆိုတဲ့နေ့ကျရင်တော့ သူသိမှာပါလေ။ ဒါမှမဟုတ်များ ယာလည်းညက်စေ ကြက်လည်းပန်းစေလို့များ လုပ်နေသလားမသိဘူးလေ။ မပြောချင်ပါဘူး အချစ်ရယ် လင်းတလောက်တော့ ငှက်တိုင်းလှနိုင်ပါတယ်။ နွားကြော့ဆိုလေ ချုံတိုးလေဆိုတာမျိုး ကိုယ်မလုပ်တတ်ပါဘူး။ အလကားရတဲ့ သမက်… အဲ… နွား သွားဖြဲကြည့်မနေပါနဲ့လို့။ မကောင်းပါဘူးလေ။ နှံပြည်စုတ် အမြှောက်နဲ့ချိန်တတ်တဲ့ မင်းမိဘတွေကို လက်တုန့်မပြန်ချင်ပေမယ့်လည်း တခါတခါကျရင် အကြံကုန် ဂဠုန်ဆားချက် လုပ်ပြီး ကြွက်မနိုင် ကျီမီးရှို့ချင်ရှို့ပစ်မိတော့မှာ။ ရော့…ပတ္တမြား ရော့…နဂါး မှလုပ်တတ်တဲ့ မင်းမိဘတွေကို ဆင်လည်း ဆင်အထွာနှင့် ပုရွက်ဆိတ်လည်း ပုရွက်ဆိတ်အထွာ နဲ့ပါလို့ ကြုံရင်ပြောလိုက်စမ်းပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ မိဘဆိုတာ သားသမီးကို ဆင်စီးပြီး မြင်းရံစေချင်တာကို ကိုယ်သိပါတယ်။ ဒီတော့ မျောက်သားစားချင် မျောက်မျက်နှာကြည့်ဆိုသလို ကိုယ်နာလည်ပေးရမှာပေါ့။ တကယ်ပါ အချစ်ရယ် ကိုယ့်ဘ၀ဟာ ရေတွင်းထဲက ဖားသူငယ်လို၊ ကိုယ့်အဖြစ်ဟာပေါ့စေလိုလို့ ကြောင်ရုပ်ထိုး ဆေးကြောင့်လေးဆိုသလိုဖြစ်ရုံမက ကိုယ့်အသည်းနှလုံးတွေဟာ မင်းနဲ့ဝေးမှ ကျီးကန်းတောင်းမှောက်၊ ငါးရံ့ပြာလူး၊ ကြောင်မရှိကြွက်ထ ဆိုသလိုမျိုး ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီလောက်လှတဲ့ သမီးမျိုးကို မွေးထားတဲ့ မင်းအဖေကို ပြောလိုက်ပါ။ အိုင်တွေ့လို့မှမလူးကျွဲရူး၊ ငါးကြော်မကြိုက် ကြောင်မိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့လို့။ ဘာပဲပြောပြောပါ။ မင်းမရှိတဲ့ ကိုယ့်ဘ၀ ဟာ နွားကွဲ ကျားကိုက် ဆိုသလိုဖြစ်လို့၊ မင်းဆီက ကိုယ်မျှော်နေတဲ့ အချစ်တွေကလည်း ကျားသနားမှ နွားချမ်းသာ ရမဲ့ ဘ၀မျိုးဖြစ်နေပါပြီ။ ယုံပါ၊ ကိုယ်ဟာ မျက်နှာမများတတ်သလိုလယ်ထွန်သွား နွားမေ့ လူစားမျိုးလည်း မဟုတ်တာ အမှန်ပါ အချစ်ရယ်။ တကယ်ပါအချစ်ရယ်… ကိုယ့်ရင်ထဲက အချစ်တွေဟာ မင်းတုန့်ပြန်မှ စူဠလိပ်ရေထဲလွှတ်သလိုမျိုး စိုင်ကော်လို့ချုံပေါ် ရောက်ပြီး ရွှေပင်မှာနားတဲ့ရွှေကျေးလေး ဖြစ်တော့မှာပါ။ ချစ်သူ . . . . ငါမင်းကိုချစ်တာ မာသာထရီဇာ လို မာယာပလီပလာ တွေမပါ ပါဘူး . . . မယုံရင်ကျန်ကျောင်း လို မှန်ပြောင်းသုံးပီး ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ (နှလုံးသားထဲကိုပါ) မင်းကိုချစ်တဲ့သူတွေများထဲ ဂျူလိယက်ဆီဇာ လို အလုအယက်ဆီးပါလို့မပြောပါနဲ့ ပါးကြီးမှာမွေးလို့ မာနကြီးတက်လို့ပါ။ တကယ်ဆိုငါဟာမင်းကို ဘင်လာဒင်လာ ဒင်လို ကြင်နာခြင်တဲ့သူပါ ရယ် ။ မင်းဘေးမှာ အမြဲတမ်း ဒိုင်ယာနာ လို ထိုင်ကာသာ နေလိုက်ခြင်ပါရဲ့ . . . အဲ့ဒီအခါကြရင် ဂျော့ဘွတ်(ရ်) လို လောကွတ်လေးလိုတော့လုပ်ပါ . . အာရာဖတ်လို ဘာလာကတ်နေတာလဲ လို့ အော်မထုတ်လိုက်ပါနဲ့နော် . ..စိတ်ကြီးတဲ့နေရာမှာ ထိပ်သီးမိုလို့ပါ။ မဟုတ်ရင် ပေါင်ချိန်ကို ဗြောင်လိန်တာထက် ဆိုးသွားလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ ငါဟာအိုဝင် လို အပျိုမြင်တိုင်းငမ်းနေသူမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။ မင်းကိုရမယ်ဆိုရင်လေ ကောလင်းပါဝလ် လို တောတွင်းတောင်ထဲမှာနေပြီး ထယ်စောက်လို လယ်ပေါက်ကျွေးဆိုလဲ ကျွေးပါမယ်။ မင်းအတွက် Prado ၀ယ်မပေးနိုင်ပေမဲ့ ဆရာခိုတော့ဝယ်လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ် ။ ကွန်ဒိုမှာမထားနိုင်ပေမဲ့ သွန်ဆိုသွန်ထားနိုင်ပါတယ်။(ရေအိုး) မင်းကသာ ထွာဝူချန်း လို သွားယူစမ်းဆိုရင်လေ ကိုရွှေထူးလို မြေတွေတူးလို့နိုက်ရဲပါတယ် ။ (လိပ်ဥ) ဒါတွေကို ဆန်ဖရန်စကို လို အကြံအဖန်တွေပိုတယ်လို့မထင်ပါနဲ့နော်။ လန်ဒန် လို အမှန်အကန်ပဲဆိုတာ ယုံကြည်ပြီး နီကိုရဲ လိုဒီလိုပဲလို့ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်လုပ်ပါနဲ့တော့။ ကိုယ့်အချစ်တွေကို ဘက်ခမ်း လို လက်ကမ်းပြီး ကြိုလင့်ပါတော့ကွယ် . .
ဟီး မေးထဲရောက်လာလို့ တင်ပေးလိုက်တယ် ချစ်သူကို ရည်းစားစာရေးပြီး ပေးတတ်အောင်လို့
အဲလိုနဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေးဖြစ်သွားရောဗျာ..။ အဲလိုနဲ့ တစ်ရက်ကြ ကောင်လေးကနေ ကောင်မလေးကို ဖြတ်စာပြန်ပေးတယ်ဗျ..၊
ဒီ ဒဏ်ရာဟာ အနာသိပေမဲ့ ဆေးမရှိပါဘူး..
အိုးချင်းထားလို့ အိုးချင်းထိမိတဲ့သဘောတရားအရ ကိုယ့်မှာ စားရကန်ကြုံလို့ မုတ်ဆိတ်ပျားစွဲပြီ ထင်လိုက်တာ..
အစွဲခံရတာ ပျားမဟုတ်ဘဲ.. ကျားဖြစ်နေပါကောလား..
ဆက်ပြီးတော့ စားရမှာလည်း သဲတရှပ်ရှပ်၊ လွှင့်ပစ်ဖို့ကလည်း အဆီတဝင်းဝင်းနဲ့ ဖြစ်နေပြန်တော့..
စစ်မရောက်ခင် မြားကုန်တယ်ပဲပြောပြော.. ငါးစိမ်းကို မြင်လို့ ငါးကင်နဲ့တူတဲ့ မင်းလေးကို ပစ်တယ်ပဲ ပြောပြော..
သူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက် ကိုယ်တစ်ရွာပြောင်းဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ.. ဒါပေမယ့် မစားရတဲ့ မင်းလေးကို သဲနဲ့တော့ မပက်ခဲ့ဘူးနော်..
ကိုယ့်မှာက မိဘတွေ ဆုံးမထားသလို "ဘဲဥပေါ် ကျောက်ပြင်ကျလည်း ဘဲဥကွဲ၊ ကျောက်ပြင်ပေါ် ဘဲဥကျလည်း ဘဲဥပဲ ကွဲ"ရမယ့်အဖြစ်ကရှိနေတော့...
အားမတန်ဘူးထင်တာနဲ့ မာန်လည်း လျော့လိုက်တာပါ..
မညားသော ချစ်သူ၊ မသေသော ဆေးသမား ဆိုတဲ့ စကားပုံလည်း ရှိတာပဲလေ...
ဒီကြားထဲ မင်းမိဘတွေက စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်း ရောင်းနေချိန်ဆို ဆေးရိုးသည်က ကန့်လန့်ကန့်လန့် ဝင်ပါလိုက်သေးတယ်..
တကယ်ဆို ရွာနားကမြက်ကို ရွာနွားပြန်မစားတတ်တာလည်း မင်းလေး နားလည်သင့်ပါတယ်.
ဒါကြောင့် နောင်ထပ်တွေ့ဖြစ်ရင် ဆင်ဖြူမျက်နှာ၊ ဆင်မဲ မကြည့်ဝံ့သလိုပဲ မဆိုင်သလိုနေပေးရင်း..
ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကို မွှေးတုန်းပန်ပြီး နံတော့ ပစ်လို့ ရိုးစွပ်ချင်လည်း ရိုးစွပ်လိုက်ပါ..
ဆုပ်လည်းဆူး စားလည်းရူးမယ့် အခြေအနေ မရောက်ခင် ကြာကြာဝါးမယ့် သွားဆိုတာ.. အရိုးတွေကိုတော့ ကြည့်ရှောင်တတ်ရမယ် မဟုတ်လား...